Indlela To Travel Ngokukhuselekileyo Ngexesha The Coronavirus Ukwenzeka | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Indlela To Travel Ngokukhuselekileyo Ngexesha The Coronavirus Ukwenzeka
zokuhamba Qeqesha, Travel Europe
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 04/04/2020)
I Coronavirus Ukuqhambuka ibe ngunobangela enkulu inkxalabo abantu ehlabathini jikelele, kodwa mhlawumbi yenye yeengxaki ezinkulu kukuba abahambi ejongene. Ngenxa zohambo kunzima ukutshintsha namatikiti rhoqo sele ulihlawulele, ukuze ukwena ukuba uqhubeke kunye nezicwangciso zakho kunokuba lokusula. Ukuba ukhetha ukwenza njalo, ngokunenzuzo la macebiso ukuqinisekisa ukuba ukuhamba ngokukhuselekileyo ngexesha Coronavirus kokuqhambuka kwaye ufumane zonke Corona updates ezintsha.
Uloliwe Transport I-Eco-Friendly kunye ikhuselekileyo Way To Travel. Thi sihloko kubhalwe ukuba afunde Train Travel yi Gcina A Isitimela, Engambi Train Amatikiti Website In The World.
Ekuqaleni, ziyini Coronavirus? Ku va uhlobo lwe intsholongwane liquka izifo zemiphunga ezifana Middle East kungaPhefumli Syndrome (zezi-) kwaye ezimandundu ezihlasela zosulele ngokuphefumla Syndrome (SARS). Lo nyaka Coronavirus inoveli Ubizwa COVID-19 yaye kukholelwa ukuba zazivela kwiphondo Hubei lwase China, kwisixeko Wuhan. Sisifo esosulelayo kakhulu iimpawu umkhuhlane-ezifana, kubandakanya umkhuhlane, umqala obuhkungu, ukhohlokhohlo, kunye iimpumlo ezivuzayo. Ekubeni wafika kuqala ukuze kwaziwe ngoJanuwari, esi sifo iye yanwenwa kakhulu Asia kunye nehlabathi liphela, amazwe echaphazela afana Japan, Khoriya eseMzantsi, ElamaTaliyane, iunited States, ne Iran. Oku kuye kwabangela nokungabilula kokuhamba okanye abacebisi zokuhamba kwiindawo ezininzi, nangona nezininzi nangoku iphila ukuhamba.
Indlela To Travel Ngokukhuselekileyo Ngexesha The Coronavirus Ukwenzeka?
Nangona kumaZiko for Disease Control and Prevention (CDC) uye walumkisa nxamnye uhambo ezingabalulekanga kwabo kumazwe bachatshazelwe kakhulu kakhulu, enkulu wehlabathi ibona kulinganiselwe, ukuba macala. the World Health Organization likubona COVID-19 a Health Public Emergency of International Inkxalabo kunokuba a bhe, oludinga ukuba uqhubeke abo zohambo ukuba uqaphele ukuba. Nje nonakekelo ukugcina impilo yakho usebenzisa la macebiso:
Icebiso 1: Fumana Onke amachiza akho
Ngelixa oku kubacacele, kubalulekile ukuba uqinisekise ukuba umelwe kukuba zonke zokugonya bakho phambi kokuba uqale uhambo lwakho. Ukuze ufumanise ukuba kufuneka oko kuqhume phambi kokuba uye, khangela website ye CDC ukuze ufumane inkcazelo lwezempilo. Ukuqinisekisa ukuba bakhuselwe ukusuka njengoko izigulo ezininzi nolunokuthintelwa kangangoko kunokwenzeka ngundoqo ukugcina inkqubo yakho onomzimba.
Icebiso 2: Zisa iintsholongwane esisula sicoceke
Ezinye ukuqhambuka kwesi ezimbi sele sibonile kwiindawo nabo close, ezifana kungaphumi Diamond Princess ship e Japan, apho uhlala lusekeleke nje ngaphandle eTokyo. Ukuba nabo babehamba phakathi kwezinye abakhweli ezininzi, njenge-moya, ukuba uqiniseke ukuba sicoceke yakho indawo. Zisa usula antibacterial kwaye ucoce kwingingqi yakho xa ufika. Oku kuquka osula iingalo zakho, cupholders, iitafile yetreyi kunye nayiphi na indawo, ukuba uya kuba yomxhaso.
Icebiso 3: Gcina Izandla zakho Clean Ukuba ufuna ezinika Ngokukhuselekileyo Ngexesha The Coronavirus Ukwenzeka
Ngoxa abantu abaninzi bazama ukuba bazihlangule intsholongwane nge ubuso iimaski, kwinyani, oogqirha baye bafumana abo kangako nto ukuze uhlale usempilweni. kunokuba, ukuhlamba izandla rhoqo kufumaniseka ukuba sisebenzayo okuhlala unempilo. Ukuba uhamba kwindawo ethile apho aniyi rhoqo kukwazi ukuba uhlambe izandla zakho, ukuzisa sanitizer ngesandla endaweni kwaye usebenzise rhoqo.
Ngale ndlela efanayo, ugcine izandla zakho ebusweni bakho, yaye kude emlonyeni wakho namehlo. Zizo ezi iindawo basengozini enkulu yokuba ufumane usulelo.
Icebiso 4: Fumana Insurance Travel
Ukuba US-based, inala credit cards ezinezinto eyakhelwe-ngaphakathi inshorensi yokuhamba, nokuba kuza kufuneka ukuba bahlole umkhuphi- ikhadi lakho ukuze ubone ukuba ugqabuko olutsha Coronavirus ehlanganiswa. Ukuze wonke umntu, kunjalo, kuza kufuneka inshorensi umdla lokuthenga ukuba amacala ukuqinisekisile of intsholongwane kuqala ziyavela kwaye zisasazeka kwilizwe lakho yokuhamba.
Le tip kudlulela zokuhamba ibuye, ezifana amatikiti etreyini, iihotele, eehambo. Nangona kusenokuba ibize phambili ngakumbi incwadi, lula yokuba izicwangciso zohambo engabuyiswayo ungakwazi ukuhlawula off elikhulu kwimeko yokurhoxiswa.
Icebiso 5: Hlala Deda Izihlwele!
Iingcali zezempilo ziye wamlumkisa ukuba gciwane nge contact uluntu, nto leyo ethetha ukuba kufuneka uhlale kude kwiindawo ezixineneyo kangangoko kunokwenzeka. Oku kunciphisa ukuvela kwakho abantu abagulayo. Kanjalo, utsalo lwezotyelelo abafane ukutsala izihlwele, kodwa kufuneka kuba nako utyelelo ngamaxesha off-peak ukuba iindwendwe ephantsi. Kwiindawo ezifana Paris, oku kusenokuthetha ukuhambela Louvre ube njengomqala wesigcina-museum okanye ngaphambi kufutshane nje endaweni embindini imini xa iincopho abakhenkethi traffic.
Kanjalo, kusenokuba nzima ukuba aphephe izihlwele ngokupheleleyo, ikakhulu mikhosi. Nangona enkulu iYurophu ngokubonakalayo irhoxisiwe imithendeleko ezifana Carnivale Italy kwaye nkqu expo Mobile World Congress e Spain.
Icebiso 6: Zikhathalele
Travel kuphuthuma, sonke siyazi ukuba. kunjalo, uhlobo-high speed iphele yokuhamba akuthethi ukuba kufuneka ukuba usebenzise ngokwakho abadlakadlaka. Kusenokubonakala nomtsalane ukuba sivuke kwi kuqhuma ukusa, intloko de kwangentseni, kodwa kubalulekile ukuba uqinisekise ukuba umnyamekelayo ngokwakho ezintweni zonke fun. Ngoba? Ngenxa ukulala ezaneleyo ukutya okunempilo kuthetha umzimba wakho ukuzikhusela kwizifo ngezifo. Oku kubaluleke kakhulu ingakumbi abo ezithandwa zizifo, ezifana abadala okanye abo omzimba sakhiwe.
Iindawo ezinika umdla Ngokukhuselekileyo Ngexesha The Coronavirus Ukwenzeka – Okukwintsusa
Nangona kukho ngokuqinisekileyo inkxalabo ngabo sele ulihlawulele umdla ngeli xesha, kukho iindlela kuwe ukuhamba ngokukhuselekileyo ngexesha Coronavirus kwesifo. the COVID-19 esosulelayo, kodwa kumazwe amaninzi nje kodwa abachaphazelekayo kwaye nangoku ekhuselekileyo ukuhamba. Ukuba uceba kwi kuqhutyekwe iholide yakho, usebenzise la macebiso ukuze uzigcine usempilweni. Qinisekisa ukuba ulala ngokwaneleyo yaye utye kakuhle, ukufumana onke amayeza akho efunekayo, ekucoceni iindawo ezingqonge kuwe zintsholongwane, kwaye ugcine zohambo lakho abongi. Thenga inshorensi yokuhamba futhi ningaphinde ezixineneyo iindawo kangangoko kunokwenzeka, ngaphezu kwakho konke ugcine bazi. Hlala wena ukulungele ngokwenene kwimeko Coronavirus loqhambuko kuyavela kwilizwe lakho phezulu.
Enye yeendlela eziphambili ukuhamba ngokukhuselekileyo ngexesha loqhambuko coronavirus nge loliwe – kunandipha lula kunye nokhuseleko ohambahambayo ngololiwe kunye nokusetyenziswa Gcina A Isitimela!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “Indlela To Travel Ngokukhuselekileyo Ngexesha The Coronavirus Ukwenzeka?” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/travel-safely-coronavirus/ ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
zokuhamba Qeqesha, tips zokuhamba train, zokuhamba Train UK, Travel Europe
zokuhamba Train Hungary, zokuhamba Train Spain, zokuhamba Train UK, Travel Europe
zokuhamba Train Austria, tips zokuhamba train, Travel Europe